कसैले लगाउन नपाउने १० नम्बर जर्सी मेस्सीले किन लगाउन पाए ? - Naya Pusta
कसैले लगाउन नपाउने १० नम्बर जर्सी मेस्सीले किन लगाउन पाए ?
एजेन्सी। हालै भारतका महान क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको जर्सी नं १० रिटायर गरियो। अब कसैले पनि यो जर्सी लगाउने छैनन्।
भारतीय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने खेलाडीको जर्सी नम्बर १० हुने छैन। हालै क्रिकेटर शार्दुल ठाकुरले १० नम्बर जर्सी लगाउँदा विवाद भएपछि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिसिसिआइले १० नम्बर जर्सी रिटायर गरेको थियो।
यस्ता खेलाडी अरु पनि छन् जसको जर्सी नम्बर रिटायर गरिएको छ । अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर फिलिप ह्युजको २०१४ मा क्रिकेट खेल्दै गर्दा चोट लागेपछि निधन भयो । त्यसपछि अस्ट्रेलियाको क्रिकेट बोर्डले उनको जर्सी नम्बर ६४ रिटायर गरिदियो । अब यो नम्बर कसैले लगाउने छैनन् । अमेरिकाका दिग्गज बास्केटबल प्लेयर माइकल जोर्डनको जर्सी नम्बर २३ पनि रिटायर भइसकेको छ । उनले १९९९ मा सन्यास लिएपछि उनको जर्सी रिटायर गरिएको हो।
रोचक त के भने अर्जेन्टिनाका महान फुटबलर डिएगो म्यारोडोनाको जर्सी नम्बर १० पनि रिटायर भइसकेको हो । म्यारोडोनाले सन् १९९७ मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका थिए । त्यसको ४ वर्षपछि अर्जेन्टिनाको फुटबल बोर्डले यो जर्सी रिटायर गरिदिएको थियो । तर अहिले लियोनेल मेस्सीले त्यही १० नम्बर जर्सी कसरी लगाउँछन् त ? यसको कारण स्वयं म्यारोडोना हुन्।
मेस्सीले सुरुमा यो जर्सी लगाउँदैनथे । तर, म्यारोडोना स्वयंले आफ्नो १० नम्बर जर्सी मेस्सीलाई उपहार दिएका हुन् । यही कारण मेस्सीले यो जर्सी लगाउँछन्। मेस्सीपछि भने शायद यो जर्सी नम्बर कसैले लगाउने छैनन्।
अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा, नाईजेरिया र आईसल्याण्ड घर फर्किए
पोखरा : जारी कोकाकोला कपमा शनिबार सात खेलहरु सम्पन्न
महेन्द्र धोनीको भित्री कुरा के थियो त्यस्तो ? जसले साक्षीलाई तनाव बनायो